२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:५६
काठमाडौमा बढ्दो हत्या र एसिड आक्रमणले गर्दा सर्व साधारण बीच त्रास बढिरहेको छ । ललितपुर हत्या काण्डले गर्दा सोसल मिडिया एक हप्ता देखि तात्तिएको थियो भने हिजो साझ फेरि एसिड आक्रमणको घटनाले गर्दा काठमाडौ बासिहरु को मुटु कामिरहेको छ । किन बढ्दो छ हत्या र एसिड आक्रमण ? के सुरक्षित छन् नेपाली खुलेर बाहिर हिड्न ?
यहि विषयमा प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरल संग क्यानाडा नेपालको तर्फ बाट सन्तोष निरौलाले गरेको भिडियो कुराकानीमा प्रवक्ताले नेपाली लाई निर्धक्क भएर हिड्न पहल गरे । प्रवक्ता विश्वराज पोखरलका अनुसार हत्या काण्ड र एसिड प्रकरण घरायसी कारणहरु ले गर्दा आवेशमा आएर घटना घटेका हुन् र साथै डर र त्रासित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बरु आफ्नो वरिपरिको अवस्था निहालेर सतर्क रहन चाही सुझाव दिए ।
प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरल भन्छन्: अहिले हत्या र एसिड प्रकरण बढ्नुको मुख्य कारण भनेको नै घरायसी मुद्दाले गर्दा हो । मनमुटाव र झगडाका कारण होस गुमाएर गरिने गल्तिले गर्दा यस्तो दुखद घटना हुने गरेको छ र प्रहरी प्रशासन रात दिन नभनी न्यूनीकरण गर्न खटिएको छ । समाजमा डर र त्रासको अवस्था नरहेको तर पनि छर छिमकीमा हुने घटना संग सतर्क चाहि रहन जरुरी छ ।
प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरल संगको कुराकानीको भिडियो: